Food, Drink & Recipes » ကောင်းကင်ပြာနဲ့ အူးသန့်စင် – Detoxing	48
Detoxing ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကျနော်တို့က အစားစုံစား သတ္တဝါ/လူတွေမို့ စားလိုက်တဲ့ အစားအစာထဲက အဆိပ်အတောက် ဓာတ်တွေ ဟာ အူ၊ အစာအိမ်၊ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ သွေး စတာတွေထဲမှာ ကျန်နေတတ်ပါတယ်။အဲဒီ အဆိပ်အတောက်ဓာတ်ကို လျှော့ချ၊ဖယ်ရှားတာမို့ ဒီတောက်ဆင်း လို့ ခေါ်တာပါ…
၂) ကြိတ်ဖျော်ထားတဲ့ အနှစ် စားသုံးသောက်သုံးခြင်း ၃) ဖျော်ရည်သောက်သုံးခြင်း
၅) ဒီတောက်ဆင်း အတွက် အထူးဖော်စပ်ထားတဲ့ ဆေး သောက်ခြင်း ၄ နဲ့ ၅ က ဆေး မို့လို့ ကျနော် ဒီအပိုင်းမှာ မပြောတော့ပါဘူးးး
အလွယ်ဆုံးပဲ၊ ကျနော်က အချိန်ခိုး၊ လူပျင်းမို့
၂) ကြိတ်ဖျော်ထားတဲ့ အနှစ် စားသုံးသောက်သုံးခြင်း ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းက ထမင်းမလွတ်ပဲ ဆီလွတ်တဲ့ အပြုတ်နည်းနဲ့ စားလို့ရပါတယ်။
အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ်ကို သန့်စင်ပေးတဲ့ သစ်သီးစိမ်ရေ (www.facebook.com/pages/ကျန်းမာရေးသတင်းများ/231741783686751)
ချစ်စွာသော မိတ်ဆွေတို့ရေ ဗိုက်ပူ အလှ ပျက်နေလို့ စိတ်ညစ်နေကြ ပါသလားရှင်။ ဆေးသောက်စရာ မလိုပဲ အရမ်းကို ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းလေး တစ်ခု ရှိပါတယ်။ တစ်ရက်တော့ ပင်ပန်း ခံရပါမယ်။ အနည်းငယ် ခက်ခဲတဲ့ အတွက် အစာအိမ်ရောဂါ ရှိသူ၊ သွေးအားနည်း ရောဂါ ရှိသူတွေ အတွက်တော့ မစမ်းသပ်ကြဖို့ မှာကြားလို ပါတယ်ရှင့်။
နောက်ရက်များတွင် နှစ်သက်ရာ ပြန်လည် စားသောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ready made food များကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ကျဉ် ရပါမည်။ နို့နှင့် နို့ထွက် အစားစာ များကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ကျဉ် ရပါမည်။ သစ်သီးဝလံ များကို ပိုမို စားသုံးရ ပါမည်။ ညဘက်တွင် အသီးနှံ တမျိုးမျိုး ကို ညစာ အစားထိုး ဖြည့်စွက် စားသုံးနိုင်ပါသည်။
မိမိတို့ နေ့စဉ် စားသုံးခဲ့သော အစားအစာများ အကြော်ဆီများ ဆီဦးထောပတ် များအတွက် အူသည် မည်သည့် အခါမှ မဆေးကြော ခဲ့ရပါ။ ထို့ကြောင့် ဗီလိုင်ဟု ခေါ်သော အမြှေးလေးများမှာ ငါးကန်များ ရေညှိ တက်သကဲ့သို့ အညှိလေးများ တက်နေပါသည်။ ထိုသည်ကို ဆားရေနွေးလေး များဖြင့် ဆေးကြော သန့်စင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ဆေးကြော လိုက်ခြင်းဖြင့် နောင်အခါ စားသောက်သော အသီးအနှံ အစားအစာ များမှ အာဟာရများ ပိုမို စုပ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ြပီး ကျန်းမာ သန်စွမ်းသော ကိုယ်ခန္ဒာကို ပိုင်ဆိုင်လာမည် ဖြစ်သည်။
ရေတစ်လီတာထဲကို မေပယ်ဆီရပ် (Maple Syrup) ၄ ဇွန်း၊ သံပုယို တစ်လုံး အရည်ညှစ်ထည့်ထားရပါတယ်၊ ငရုတ်ကောင်းလို အမှုန့်ကလည်း ထည့်ထားရပါတယ်။ ဆာတိုင်းသောက်၊ ၂ နာရီ အတွင်းကုန်အောင်သောက်၊
– ၂ ပတ် လုံးဝ အဖတ်မစားတဲ့ အပြင် ရေများများသောက်ပြီး အချဉ်ဓာတ်ပဲ ဝင်တာမို့ မပိန် ခံနိုင်ရိုးလားး?? – ၂ ပတ်အတွင်း ၄ ကေဂျီလောက် ကျပါတယ်။
– အဲ !!!! အစားမဖြတ်နိုင်သူ ကေဇီ ပြန်အစားမှာ ၆ ကေဂျီလောက် ပြန်တက်တာတော့ မပြောတော့ပါဘူးးး အူဆေးပြီးရင် အစားအသောက်ဓာတ်ကို အာဟာရကို ပိုစုပ်ယူတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်နော့။
Mr. MarGa says: ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း လုပ်​တဲ့နည်းတစ်​ခုရှိတယ်
(သူက​တော့ သောက်​တဲ့လစ်​မစ် များလာရင် လုပ်​တာပဲ )
naywoon ni says: ဟုတ်​တယ်​ ။ ဂဂ နာလည်းလုပ်​ဖူးတယ်​ ။ အရက်​ပြင်း ​သောက်​တာများသွားလို့ ကိုယ်​လက်​မအီမလည်​ဖြစ်​​နေရင်​ စီး​တော်​ယာဉ်​ စက်​ဘီး​လေးထုတ်​ ၂မိုင်​​လောက်​ရှိတဲ့ ရွာသစ်​ဆိုတဲ့ ရွာက​လေးရဲ့ အပြင်​ကထန်းတဲ​လေးကို ချီတက်​တာပဲ ။ ၀မ်းဘယ်​​လောက်​ချုပ်​​နေပါ​စေ ပင်​ကျ​ရေ ​လေး အုန်းမှုတ်​နဲ့ သုံးမှုတ်​​လောက်​​သောက်​ပြီးရင်​ ခြုံတိုးရ​တော့တာပဲ ။ ထန်း​ရေ တစ်​မြူ​လောက်​​သောက်​ပြီး ခြုံသုံးခါ​လောက်​တိုးပြီးရင်​ ၀မ်းထဲက အရိအချွဲ ကုန်​ဘီ ။ ထန်းတဲနဲ့ မနီးမ​ဝေးက “န၀င်း” ​ချောင်းထဲ အ​ခြေအ​နေကြည့်​ပြီး တိုင်းရင်းသူ​တွေလို ဆင်းစိမ်​လိုက်​ ။ အမူးလဲ​ပြေ လူလည်း​ပေါ့ပါး ။ ​နောက်​​နေ့အတွက်​ အင်​အား​တွေဘယ်​က ရလာမှန်းကိုမသိ ။ ကုန်​လွန်​ခဲ့တဲ့ နှစ်​နှစ်​ဆယ်​ ပြန်​လွမ်းပါ၏ ။
Ma Ma says: (အူဆေးပြီးရင် အစားအသောက်ဓာတ်ကို အာဟာရကို ပိုစုပ်ယူတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်နော့။)
ပြီးရင်လည်း အာဟာရကို ပိုစုပ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတော့ကာ ပင်ပန်းရကျိုးမနပ်ဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ချစ်မ။
Kaung Kin Pyar says: Post တင်ထားပြီမှန်းသိကတည်းက လိုင်းပေါ်တက်နေတာ။ ခုမှ ရွာဝင်လို့ ရတယ်။
ကြွေလွင့် ပန်း says: ၁၄ ရက်နည်းကတော့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ဘိုထိုင်ကို ဖက်ထားပြီးနေနိုင်ရင်တော့ အဆင်ပြေပါမယ် ကို ကင်းကောင်ပြာရော။
တစ်လအတွင်းမှာ ၁၄ ကီလိုကျဖို့ အာမခံတော့ 43 ကီလိုကနေ – 14 ဆိုတော့ 63 ပေါင်။ မဖြစ်သင့်ဘူး၊ မဖြစ်သင့်ဘူး။ မြှောက်ပေးတိုင်း မလုပ်သင့်ဘူး။ သူများတွေ Overweight တွေ ဖြစ်ပလေ့စေ။ ဆင်ပိန်တော့ ကျွဲလောက်ကျန်သေးတာ။
ခင်ဇော် says: အဲ ဒီ မမဂျီး ၁၄ ရက်ကတော့ အူဆေးတာ မကတော့ဘူး ကင်းကောင်လေးးး
lu lu says: ခုလို သိ ရ တာ ကောင်းလိုက်တာ
Mike says: .လောလောဆယ်တော့ ပီဒီအက် ပြောင်းပြီးသိမ်းထားလိုက်တယ်…ဘယ်တော့လုပ်ဖြစ်မယ်မသိသေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: လွယ်တာလေး အရင် လုပ်လေ Mike Mike..
hmee says: စိတ်ဝင်စားတယ်။ သောက်ကောင်းတယ် ပြောတာလေးကို လက်တွေ့ ကတော့ မသေချာ။ တရိပိရိပ်နဲ့ အဆီတွေတက် ပေါင် ၁၄၀ နားနီးနေပြီ။ ချစ်ချစ်ကလည်း ရာဇသံပေးနေပြီ ဒီ ထက် ပိုဝလာရင် မကြိုက်ဖူးနော်တဲ့။ ရန်ကုန်မှာတုန်းက နေပြည်တော် ရောက်ရင် ၀ိတ်ချမယ် စိတ်ကူး။ အခု နေပြည်တော်ရောက်တော့ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှပဲ လုပ်ပါတော့မယ် ထပ်တွေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: မမမှီ။
ဂျက်စပဲရိုး says: ပျင်းကလဲ ပျင်း စိတ်ကလဲ မနိုင် ဆိုတော့ကာ ၂၄နာရီ နဲ့ ပတ်ကြမ်းတိုက်တဲ့ နည်းပဲ လုပ်ကြည့်မလား စဉ်းစားတယ်။
ခင်ဇော် says: အဲဒါ ကို မစမ်းရသေးဘူးးး
ဂျက်စပဲရိုး says: TV Series အသစ် season ၃ ၄ ခု လောက် ရှာထားလိုက်ဦးမယ်။
Mr. MarGa says: အဘနီ ပြောမှပဲ ထန်းတောပြေးရမလိုဖြစ်နေပြီ ဆရာသော်တာဆွေရဲ့ ကျွန်တော့်ဘဝဇာတ်ကြောင်းထဲက မ.လာတာ
အောင် မိုးသူ says: ကျောက်ကပ်အတွက် နည်းလမ်းယူသွးပါတယ်
ခင်ဇော် says: အဲဒါ အသည်းရော ကျောက်ကပ်ရော သန့်သတဲ့။
အောင် မိုးသူ says: မနေ့ကတော့ လုပ်သောက်ကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငါးနာရီမစိမ်းထားမိဘူး။ ဒီနေ့ထပ်ပြီး အချိန်အတိအကျ စိမ်ပြီး သောက်ကြည့်ဦးမယ်။ ရေကတော့ မွှေးမွှေးလေးဖြစ်ပီး သောက်လို့တော့ အတော်ကောင်းတယ်။ သခွားသီးအစား ပန်းသီးထည့်မိလိုက်တယ်။ ဒီနေ့တော့ သခွားသီးထည့်ပြီး သောက်မယ်။ :D
Wow says: ပလင့်ထုတ်ထားဒယ်အေ… သတ်တိရှိဒဲ့ တစ်နေ့ လုပ်ကျိဒါပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: တစ်ရက် ဟာ ကို အရင် စမ်းကြည့်လေ ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အခုတလော ရာသီဥတုက အရမ်းပူတော့ ထမင်းမစားချင်ဘူး.. အဲဒါနဲ့ အရွက်တွေချည်းကြော်စားဖြစ်နေတာ ၂ ရက်ရှိပြီ (ဆီနည်းနည်းလေးနဲ့ အရည်လေးနဲ့ ချက်တာပေါ့နော်..) ဝမ်းလည်း မှန်လာတယ်… မမဂျီးရဲ့ ပထမဆုံး (၃) နည်းကိုတော့ စိတ်ဝင်စားသား.. လုပ်ကြည့်အူးမယ်.. အနော်က လူပုရတဲ့အထဲ ဝလာတော့ မြန်မာအကျီဝတ်ရတာ အတော်အဆင်မပြေတော့ဘူး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: လုပ်ပြန်ပြီ။
Alinn Z says: ဝိတ်ချနည်းလေးတွေ လုပ်ပါအုန်း
ခင်ဇော် says: နောက် ပို့(စ) ကို ဆက်ဆက် ဝိတ်ချဖို့ ရေးပေးမယ်နော်
Crystalline says: တစ်​ရက်​​နည်း​တော့စမ်းမှရယ်​… ၁၄ရက်​က​တော့.. ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို…သနားတယ်​.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အင်းးး
မြစပဲရိုး says: အစာ မရှိလို့ ပိန်မယ်ဆို နေ့တိုင်း ဥပုသ်စောင့် လိုက်ရင်ပြီးရောလေ။ ကုသိုလ်လဲပါ ဝမ်းလဲဟာ ပေါ့။
ခင်ဇော် says: ခု သူတို့က ပိုလည်သေး အရီးရေ။
Ma Ei says: ပန်းသီး၊ သံပုရာ၊ ပူစီနံ ရေစိမ်သောက်ကြည့်တာ
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟမလေး အာတီဒုံ့နည်းကလွဲလို့ တခုမှမလုပ်နိုင်လောက်ဖူးရယ် ကိုဗျဇီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတို့၊
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဒီထဲက …
lamin ngel says: အူတော့ခဏခဏဆေးမိနေသလိုပဲ။အလုပ်များရင်အစားကိုမေ့မေ့နေလို့။ဗဟုသုတရလို့ကျေးဇူး
ခင်ဇော် says: အစားးး မစားးတိုင်းးးလည်းး အူဆေးးတာ မဟုတ်တာမို့
ခင်ဇော် says: တကယ်ပိန်ချင်သူများအတွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝ ၀ိတ်ချနည်း
Shwe Ei says: -detoxing လုပ်ရတာကျိုက်ပါအိ
-ထမင်းမစားဘဲ တစ်နေကုန် အသီးအနှံတွေ ထိုင်စားပီး ရုပ်ရှင် ဆယ်ကားလောက် ကျိနေရရင် ပိုကျိုက်အိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ရုပ်ရှင်ကျိ ရင် အစားစားရမှ..
ခင်ဇော် says: Credit to SK Herbal Myanmar
ကစော်ဖောက်ထားတဲ့ နာနတ်သီးဖျော်ရည်ကို ပျားရည်နဲ့ရောပြီး ကျွန်မတို့အဖွားတွေက ကျွန်မတို့အမေတွေကို ပုံမှန်စားစေခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါဟာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး အလေးချိန် ထိန်းပေးတဲ့နေရာမှာလည်း ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တာကြောင့်ပါ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီ ည ပေးး လို့ ရလားးး
kai says: ရပါ့..။
အပေါ်ရေတင်းတာနဲ့.. သောက်နေတာ…။ အရသာရော..အနံ့ရောရှိပါပေ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: လက်ဖက်ခြောက်မှာ စိန့်ပြည်ကို ခုထိ မယှဉ်နိုင်ဘူးဗျ။
kai says: 1) Apple Cinnamon Detox Water (as seen on Dr. Oz)
ဇီဇီခင်ဇော် says: Credit to – အလှအပတွက်ရွေးချယ်စရာ Cosmetic Queen